Covid-19 Informationen | albatros-direkt.de
Tahllaalka COVID: Wareysi Dhaqtar
Baahintan waxaan uga hadli doonnaa su'aaaha joogtada laysku weydiiyo ee tallaalka Coronavirus oo aan ka wareysaneyno Dr. Dayib Abdulkadir Aw-Muse, Head of Daryeel Medical Consultant, Consultation and Medical Training Center in Turkey.
Baahin "Tallaalka COVID-19"
Baahintan waxay ku saabsan tahay Xaqiiqooyinka ku hareereysan COVID-19, waxtarka tallaalka si guud iyo gaar ahaan tallaalka COVID-19. Tixraaca macluumaadka waa bogga soo socda: https://hackmd.io/@scibehC19vax/home
Covid 19 Info Somali
Covid 19می توانید اطلاعات درباره بیماری جدید
Halkan waxaad ka heleysaa Xog ku saabsan xanuunka cusub iyo sida aad naftaada iyo tan dadka kale uga difaaci karto.
MACLUUMAAD KU SAABSAN CORONAVIRUS IYO KARANTIILKA
Cudurka coronavirus SARS CoV-19 dartiis waa suuragal in tallaabooyin karantiil ah oo la saaro gabbaadyada, guryaha la wadaago (kaamka) IWM ay soo noqnoqon karaan wakhtiyo kala duwan.Si dadka wajaha ay u fahmaan tallaabooyinkaas oo ay la socdaan waxaa la soo jeedinayaa in si ay la fahmi karo loogu sharraxao sababta karantiil loo soo rogi karo iyo goorta ama sida ay ku dhammaan karto. Baahintan macluumaadkaas ayaa lagu soo gudbinayaa Somali.